Akhriso: Wareysiga Monica Juma kaga hadashay kiiska Badda ee Soomaaliya iyo Kenya
Wasiirka arrimaha dibadda Kenya Monica Juma ayaa wareysi ay siisay BBC focus on Afrika kaga hadashay doodda Maxkamadda ICJ ee Soomaaliya iyo Kenya.
Halkan ka aqriso wareyso oo qoraal ah.
Wariyaha: ma aamin santahay in kiiskan ICJ ee Kenya iyo Soomaaliya ay Maxkamadda si caddaalad ah u xukumi doonto?
Monica: "Si weyn ayaan ula soconaa kiiskan, billowgiisii horena waan diidnay in kiiskan ay qaaddo Maxkamadda ICJ sababtuna billowga dacwadaha waan in dhnacyada is haya soo gudbiyaan, walina waan dareemeynaa arrintaas.
Sababta aan markii dambe kiiskeenna u gudbinnay waa in aan leenahay taariikhda dalka ugu wanaagsan , waa inaan xisaabinaa maxkamadda xitaa haddii aysan sameyn wax wanaagsan, dal ahaan iyo siyaasaddeena arrimaha dibadda waxaa ay ku dhisantahay bulsho leh xiriir is dhexgal .
Marka haddii maxkamadda ay xukun riddo iyo haddii kale xukunkaas xal ma u noqonaayaa arrintan waa maya, sababta oo ah Taariikhda ayaa sheegeysa.
Soomaaliya ma qaadin tallaabooyin kale ee waxaa ay toos uga billowday Maxkamaddii ugu dambeysay, annagana ma qabno in sidaas la sameeyo, mana damaanad qaadeyno in natiijo xasilooni dhalin karta ay ka soo baxeyso Maxkamaddaas.”
Wariyaha: Kenya waxaa ay dalbatay in meel aan maxkamadda ahayn wax lagu xalliyo, waa maxay saabta aysan Soomaaliya idiinku raacin?
Monica: jawaabtaas Muqdisho weydii.
Wariyaha: maxaad ula jeeddaan meel aan Maxkamadda ahayn?
Monica: tani maha kiiskii ugu horreeyay ee Badda ah, tusaale waxaa uu dhexmarya Angola , Pure iyo Nicaragua, iyo dalal kale oo badan, kane kii ugu horreeyay maaha,waxaa jira kuwo la mid ah oo badan,waxaana muhiim an in aan barano sida loo xalliyay.
Waxaan aaminsannahay in wada xaajoodka labada dal uu aad uga fiicanyahay xukunka Maxkamadda, halkaas oo dal loo arko kan rajada leh kan kalena uu dhibbane ku yahay.
Wariyaha: Kenya ma isu diyaarisay in ay noqoto Bad la’aan haddii Soomaaliya loo xukumo kiiskan?
Monica: Kenya uma aragto arrintaas mid soconeysa, dastuurkeenna ayaa na faraya in aan difaacanno dhulkeenna.
Wariyaha: Haddii Maxkamadda u xukunto Soomaaliya, Kenya xaalad noocee ah ayey qaadaneysaa?.
Monica: Ma doonayoin aan ka hordhoco Maxkamadda go’aankeeda, marka sug aan aragnee, mana qabo aragtida ah in Soomaaliya ay ka xoo gabadan tahay Kenya dhinaca sharciga iyo kiiska Maxkamadda, xaqiiqda waa ay ka fogtahay arrintaas aad ayaan uga xoog badannahay Soomaaliya marka loo eego xagga joogitaanka iyo ku dhaqanka qaanuunka Caalamiga ah.
Wariyaha: side u aragtaa baaqii Baarlamaanka Carabta ee Kenya ugu baaqay in ay ka baxdo biyaha Soomaaliya?
Monica: maba ka war qabo oo ma arag meel hay’ad lagu magacaabo Baarlamaanka Carabta.
Wariyaha: ma qoonsanid miyaa Baarlamaanka Carabta?
Monica: anigu ma helin warqad rasmi ah oo ka timid hay’ad rasmi ah oo la yiraahdo Baarlamaanka Carabta.
Wariyaha: doorashooyin ayaa kazoo socda Jubaland, ma jiraa walaac ah in Kenya farageliso doorashadaas?
Monica: Soomaaliya waxaa ay soo gashay tiro badan oo doorashooyin ah, Kenya waxaa ay ka mid ahayd umuliyayaashii nidaamka nabadda Soomaaliya, waligeen marna kuma lug yeelan doorashooyinka Soomaaliya,nabad dhisidduna waa arrin kale.
Wariyaha: Maka warqabtaa in Mareykanku yiri kiiska Kenyaiyo Soomaaliya waxaan ku xallineynaa meel aan Maxkamadda ahayn?
Monica: haa, dalal badan ayaan ku wargelinay una sheegnay in sidaas fiicantahay mana aha kaliya aragtida Mareykanka, dad deris ah, dhaqan wadaga, xuduud leh dano badanna ka dhaxeeyaan waxaa u wanaagsan in ay wadahadalaan.
Wariyaha: Waaxamay Aragtida Kenya ee Somaliland?
Monica: Aragtida Kenya ee Somaliland waa aragtida Midowga Afrika,waxaan xushmeyneynaa xuduudaha Afrika, ee ku soo baxay baaqii Ururka Midowga Afrika ee OAU ee 1964tii.
Wariyaha: laakiin dadka waxa ay hadal hayaan xiriirka Somaliland iyo Kenya?
Monica: maxaad ka waddaa, Kenya danaheeda ayey ka shaqeyneysaa,wakiillo ayeyna ku leedahay Caalamka tusaale, DC, Los Angels waxaan ku leennahay wakiillo iyo qunsuliyado.
Wariyaha: laakiin waxaad la macaamileysaa dal ku dhawaaqay madaxbanaani isaga u gaar ah isuguna yeeray Jamhuuriyad?
Monica: wax xiriir hoose oo gaar ah nagama dhaxeeyo Somaliland, laakiin dano kale ayaa jiri kara, tusaale koofurta Suudaan inta aysan dal noqon waxaan ku lahayn xafiisyo iyo wakiillo, marka taas micnaheeda maaha inaan aqoonsannay,waxaan aqoonsannahay Soomaaliya, sida Jubaland aan ula macaamilno ayaana ula macaamileynaa qeybaha kale ee Soomaaliya, marka taas ma waxa ay ka dhigan tahay inaan dal ahaan u aqoonsannay?, maya.
Isha: BBC Focus on Africa
Booliiska Kenya oo dilay nin Al Shabaabnimo uga shakiyeen
Turkiga oo Midowga Afrika uga digay inay farageliyaan Arrimaha Soomaaliya
Qori-isu-dhiibka doorashooyinka Soomaaliya oo laga digay in la burburiyo
Caqabad soo wajahdey in guddiga doorashooyinka hortago BF Soomaaliya
Dagaalo culus oo ka dhacay Buur-dhuubo iyo Saraakiil ka hadashay
Wiil uu dhalay Madaxweyne Paul Kagame oo xil sare loo magacaabay
Mareykanka oo Ka Hadlay Sababta Loo Hakiyay Duqeymihii Laga Fulin Jiray Soomaaliya